MAANHADAL: Xaaladda amni ee Puntland siiba Bossaso iyo xaalka kalaguurka xilliga doorashooyinka (dhegayso) – Radio Daljir
MAANHADAL: Xaaladda amni ee Puntland siiba Bossaso iyo xaalka kalaguurka xilliga doorashooyinka (dhegayso)
Noofember 30, 2018 9:43 b 0
Barnaamijkeena maanta ee Maanhadal waxa aan ku falanqeeynaynaa mowduuca ugu mudan todobaadkan ahna ammaanka Puntland iyo xaaladda kalaguurka xilliga doorashooyinka Puntland. Waxa aan il gaar ku eegaynaa habacsanaanta amni ee ka jirta magaalooyinka Bossaso iyo Gaalkacyo, arag la’aanta ciidamadii booliiska ee Puntland iyo meel ay ku danbeeyeen, ciidamadii booskii booliiska loo maleeyey in ay baddaleen loona yaqaan “Ciidamada Ammaanka Puntland” iyo waxa sababaya ammaandarada baahday ee Puntland iyo maanta.
Sidoo kale waxa aan ku eegi doonnaa hanjabaahdaha lala beegsado ganacsatada Bossaso iyo canshuur ururiyaha cusub ee Puntland ka dillaacay. Waxaan kale oo il gaar ah ku eegi doonnaa cararka Bossaso ay ka carareen ganacsatadii Puntland.
Barnaamijka waxaa soo jeedinaya wariye Axmed Shiikh Maxamed Tallman.
MAANHADAL 152 Wararka 14316
Al-shabaab oo qaraxyo ismiidaamin ah ku qaaday deegaanka Goofgaduud